Hello Nepal News » यी १२ खानेकुरा, फ्रिजमा राखे बन्छन् विष !
यी १२ खानेकुरा, फ्रिजमा राखे बन्छन् विष !
गर्मीयाममा खानेकुरा फ्रिजमा राखिन्छ । तराई भेगमा दैनिक जीवनमा फ्रिजको ठूलो महत्त्व हुन्छ । खास गरी खानेकुरा ताजा राख्न र गर्मीले नबिग्रियोस् भनेर फ्रिजमा राख्ने गरिन्छ ।
तर, हामीले ताजा राख्नका लागि फ्रिजमा हाल्ने सबै कुरा त्यसरी राखिनु गलत हो । यसले फाइदाभन्दा पनि बेफाइदा गर्छ । कतिपय खानेकुरा फ्रिजमा राख्दा ती विष बराबर हुन्छन् ।
त्यसैले फ्रिजमा कस्ता खानेकुरा राख्ने र कस्ता कुरा नराख्ने भन्ने जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । यसबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ । यी १२ खानेकुरा कहिल्यै पनि फ्रिजमा राख्नु हुँदैन ।
१) पाउरोटी : फ्रिजमा पाउरोटीको सुक्खा हुने प्रक्रिया झन् तेज हुन्छ । १–२ दिनको समयभित्र प्रयोग हुने हो भने पाउरोटीलाई फ्रिजमा राख्न सकिन्छ । तर, सकेसम्म प्रयोग गर्न पर्ने दिन नै पाउरोटी किने राम्रो हुन्छ ।
२) दही : फ्रिजमा राखेर दही जमाउनु उचित हो । तर, खान योग्य भइसकेको दही पुनः फ्रिजमा राख्नु गलत हुन्छ । किनभने जमिसकेको दहीलाई थप फ्रिजमा राख्दा यसको स्वाद बिग्रने वा यसमा भएको पोषकतत्त्व पनि नष्ट हुने गर्छ ।
३) लसुन : लुसन फ्रिजमा राख्दा गल्छ । लसुनका दानाबाट सानो बिरुवासमेत उम्रिन थालेपछि खान नमिल्ने हुन्छ ।
४) टमाटर : फ्रिजले रातो र पौष्टिक टमाटरलाई स्वादविहीन बनाउन र गलाउन सक्छ । फ्रिजको साटो टमाटरलाई नाङ्लो अथवा केही भाँडामा खुला रूपले राखे राम्रो हुन्छ । आधा काटेको टमाटर बाँकी रहेमा प्लास्टिकमा बाँधेर राख्न सकिन्छ । यदि तपाईंले फ्रिजमा नै राख्ने हो भने सकेसम्म १–२ दिनमै प्रयोग गरे राम्रो हुन्छ ।
५) आलु : आलु पनि फ्रिजमा राख्नु हुँदैन । फ्रिजमा राखिएको आलुमा पानी बढी हुन्छ । र, यसले स्वाद पनि बिगारिदिन्छ । चिसो तापमानमा राख्दा आलुको स्टार्च चाँडै नै सुगरमा परिवर्तन हुन्छ । यसले आलुमा चिनीको मात्रा बढाउनुको साथै आलुको स्वाद पनि खल्लो हुन्छ ।
६) मह : फ्रिजमा राखिएको मह चाँडै नै ठोस क्रिस्टलमा परिवर्तन हुनसक्छ । यो क्रिस्टल रुपको महलाई फेरि तरल बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । र, अरु केही खाने कुरासँग प्रयोग गर्न सकिन्न ।
७) दुध : दूध फ्रिजमा राख्नु राम्रो मानिँदैन । यदि दूध खानेकुरा पकाउन वा कुनै परिकार बनाउन प्रयोग गर्ने हो भने चाँहि फ्रिजमा राख्दा पनि हुन्छ । तर, पिउने दूध चाँहि फ्रिजमा राख्न उपयुक्त मानिँदैन ।
८) फ्राई खाना : फ्राई गरेका क्रिप्सी र क्रन्ची खानेकुरा पनि फ्रिजमा राख्नु राम्रो मानिँदैन । किनभने, फ्रिजमा राखेपछि यसको स्वाद नै हराउँछ । फ्राइड चिकेन वा फ्रेन्च फ्राइज फ्रिजबाट झिकेर खानुजस्तो नमज्जा केही पनि हुँदैन ।
९) पनिर : पनिरका लागि फ्रिज उपयुक्त ठाउँ होइन । खास गरी पकाएको पनिर र त्यसबाट बनेका खानेकुरा फ्रिजमा राख्दा स्वादहीन हुन्छ ।
१०) काँचो तरकारी वा फलफूल : काँचो तरकारी वा फलफूलका लागि फ्रिज उचित ठाउँ होइन । यसले ताजा खानेकुरा फलफूलको स्वाद बिगार्छ ।
११) अण्डा : अण्डा पनि फ्रिजमा राख्नु हुँदैन । अण्डालाई फ्रिजमा राख्दा यसको बाहिरको भाग फुट्ने वा अनेक समस्या आउँछ । त्यत्तिमात्र होइन, भित्रको झोल पनि बिग्रन सक्छ ।
१२) प्याज : फ्रिजको चिस्यानले गर्दा प्याज पनि टमाटरजस्तै गल्न सक्छ । एकपल्ट काटिसकेको प्याजलाई चाहिँ प्लास्टिकमा राम्रोसँग बाधेर फ्रिजमा राख्दा केही फरक पर्दैन ।
प्रकाशित मिति ६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ११:२०